ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ရောင်းရန် Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279)
Apartment for sale in Kyee Myin Daing Township, Near Orange Super Market. Apartment area is - 1500 sqft, organized by Living-room, Hall-room, Two Master Bed-rooms, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms.
Sale Price - 950 Lakhs (Nego)
Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279)
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ Orange Super Market အနီးရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်း ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၅၀၀ စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ ဟောလ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် နှစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
တိုက်ခန်း၏ အရောင်းဈေးနှုန်းမှာ - သိန်း ၉၅၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်း (ID-279)
Property ID: S-1189731
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279)
Kyee Myin Daing
Bo Saw Oo Street (ဗိုလ်စောဦးလမ်း)
စီးပွားရေးလုပ်ရန် သင့်တော်သည့် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းကျယ်
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အရိုးဆေးရုံအနီး ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
Apartment Sale in Kyee Min Daing (ID-764)
Kaung Myat Thu Housings (ကောင်းမြတ်သူအိမ်ရာ)
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ သရက်တောလမ်းသွယ်ရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
Code-7739 ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ တတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7738 ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းသွယ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
ဆင်မင်းဈေးအနီး ၊ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ပထမ ထပ်၊အခန်း (၂) ခန်း၊ လမ်းကောင်းနေကောင်းလမ်းသန့်၊ဆင်မင်းလမ်း (၂၃'x၈၀') ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များ-09-699855112,09-699855113,09-699855114။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကွမ်းရွဲတန်းလမ်းရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
Zay Gyi Road (ဈေးကြီးလမ်းမ)
** ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ နိဗ္ဗာန်လမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ **
** ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် တိုက်သစ် ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **
Htee Dan Street (ထီးတန်းလမ်းသွယ်)
Code-7322 ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီး မြေညီထပ်+ပထမထပ်တိုက်ခန်းအားရောင်းရန်ရှိပါသည်။
code-7223 ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် တတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7222 ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် တတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7224 လှိုင်မြို့နယ်တွင် BCCကျပြီး ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7263 ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင်4Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Angel Real Estate Service
ဖုန်းဆက်ရန် 09792444317, 09773356137
Advertiser : Angel Real Estate Service
No. 37,5Floor, 165 Street, Tamwe Tsp., Yangon
Shweproperty ID: S-1189731
Asking Price : 950 သိန်း
Mobile : 09792444317, 09974401199
Office No : 09792444317, 09773356137